Waa Maxay Lacagta Suukha? ’Money market’ | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Qiimaha Wakhtigaada Waa Qiimaha Noloshaada
Cabdijabaar Sh. Axmed — June 18, 2018
Lacagta suuqa’ ‘waa halka maaliyada, damaanad sare iyo miisaaniyada aadka u gaaban’. Guud ahaan marka la raba in la sharaxo suuqa lacagta waxaan isdhihi karaa in horey loo fahmi karo macnaha guud ee ay xambaarsantahay suuqa lacagta.
Lacagta mararka qaar waxay noqotaa ‘badeeco si lacag kale loo abuuro. Haddii aan u sameyno macnayaal kala duwan sidda haddii ay shirkadaada soo iibsato agabyada sidda kuraasta, makiinadaha, kombuuterada iwm, waxay ka dhigantahay inaad qarash ku bixisay si aad agabyadaasi ugu abuurto lacag kale. ‘macnahiisa ma ahan inaad sii iibinayso ee waa sahaydii aad dagaalka ku geli lahayd.
Hadaba, dhammaan qodobadaasi ma ahan suuqa lacagta ee waa ‘xoraynta ganacsigaaga, si aad u yeelato meel aad ku qabsato hawlahaaga maalmeedka ah.
Qodobadaan ayaa ah xaqiiqda rasmiga ah ee ‘Suuqa lacagta’ sidda biilasha hantida, waraaqaha ganacsiga, aqbalaadda baanka, xisaabaadka, caddaynta deebaajiga ‘deposit, biilasha sarrifka, heshiisyada dib u celinta, miisaaniyada federaalka, deynta mudada gaaban ah iyo hantida qaaliga ah.
Inaad lacag abuurato ama sameyso ma ahan wax fudud. Laakiin hadana waa suurta gal, waxaana jira su’aalooyin badan oo ay dad badan isweydiiyaan maalin walbo oo illaahay keena. Waxaana ka mid ah siddee ku heshaa lacag. Sawabtoo ah dadka waxay aaminsanyihiin lacagta inay tahay waxa kali ee ay waxwalbo ku samaysani karaan.
Waa sax lacagta waa wax aad waxwalbo ku samaysani karto haddii ay noqoto inaad guri iibsato, gaari iibsato, jaamacadaha ugu sareeyo dunidda inaad wax ka barato, waliba inaad xajka iyo dalxiis tagto meelwalbo oo aad u baahantahay.
Maqaal uu horey u qoray qoraa Khaalid Cabdirizaaq Caskar, wuxuu cinwaan kaga dhigay “Sidee Loo Abuuraa Mashruuc Ganacsi oo Guulaysta?” qoraalkaan oo dhammaystiran halkaan kaga boqo. http://www.tukesomalism.com/archives/6460
Qoraagga ayaa si fiican u kala dhig-dhigay asigoo raba in bulshada tusiyo qiimaha ay leedahay in la abuuro ganacsi guulaysta. Maqaalkiisa ayaa si toos ah u taabanaaya ka jawaabida su’aalaha la xariira ganacsiga guulaysani kara, wuxuu yiri “Kasoo qaad inaad go’aansatay inaad ganacsi aad gaar u leedahay aad abuurto, halkeed kabilaabi?
Maxaad ku bilaabi? Sideedse u bilaabi?, waa su’aalo ay muhiim tahay inaad iswaydiisid kolka aad bilaabaysid mashruucaaga. Waxaad xasuusnaataa wax kasta marka labilaabayo inuu ku bilaabmo fikrad ama aragti kugu soo dhacday.”
Suuqa lacagta wuxuu ka koobanyahay haay’adaha maaliyadeed iyo ganacsatada kuwaasoo hawshooda salka ku haysa deynta iyo amaahda lacagaha. Ka-qaybgalayaashu waxay deynsanayaan oo ay amaahiyaan muddo gaaban, sida caadiga ah ilaa laba iyo toban bilood.
Muhiimadda suuqa lacagta wuxuu ka koobanyahay bangiga dhexe ee amaahda-bangiga oo amaahda, iyadoo la isticmaalayo waraaqo ganacsi, heshiisyada dib u celinta iyo qalabka la midka ah. Qalabkaan waxaa badanaa loo qiimeeyaa (sida, qiimaha la tixraacayo)
Cilmiga la xariira lacagaha, maaliyada, ganacsiga, suukh-gaynta iyo dhaqaalaha waxaad ka heli kartaa akademiyada www.Somalism.org qaasatan qeybta ganacsiga iyo dhaqaalaha.
Si aad u heshao dhammaan koorsooyinka ku saabsan dhaqaalaha iyo maaliyada Riix sawirka hoose,
Tags: Waa Maxay Suuqa Lacagta? ’Money market’
Next post Fatahaadaha Iyo Saameynta Caafimaad
Previous post Qaahira Iyo London Midkee Fudud Xirashada Xijaabka?